Zintle Ntamo, 16 yrs ubudala, oyi peer educator Kwamfundo High School e Khayelitsha | Rape Crisis Cape Town Blog
Zintle Ntamo, 16 yrs ubudala, oyi peer educator Kwamfundo High School e Khayelitsha
Posted on July 1, 2013 by rapecrisisblog
Mna ngokuya bendingekabiyo peer educator yakwa Rape Crisis bendingazinto ngoba ungenza njani xa udlwenguliwe bendicinga uba uyobambisa umdlwenguli qha,ngoba zange khendibenolwazi ngodlwengulo kakhulu.Olwam ulwazi beluluncinci kakhulu ngodlwengulo ndincedakele kakhulu ngokufunda kwa Rape Crisis.
Ngexesha le mfundo bendinomdla kakhulu ngoba bendifuna uba nolwazi kakhulu futhi ndikwazi ukucebisa nabanye uba mabanze njani ndiyavuya kakhulu xa ndizoba yi peer educator kwa Rape Crisis ngoba ndicendeke kakhulu.Ndimomdla kakhulu wokuba ndifunde ngoba ndizimisele ukusebenzela u Rape Crisis ndikwazi nokunceda uluntu olusengxakini, ndicebise,ndifundise,ndidlullise olwam ulwazi. Ngoku bendingekayenzi mfundo bendinokumyeka umntu nokuba undidlwengule ndingamenzi nto bendisisidenge kodwa ngoku ndinolwazi yaye ndiyazindla ngalonto nam ndizakutsho ndikwazi ukuthethe ngodlwengulo ebantwini ndidlulise olu lwazi ndilufumeneyo. Kule mihla siphila kuyo abantu badlwengulwa zizizalwana zabo, umntu ubumthembile nongacingelanga ukuba angakudlwengula yinto eselisenziwa mihla le kufuneka sihlale sizikhusele sinolwazi olukhulu.
Emva kwe mfundo ndizive ndomelele ndifudumele lulwazi nendlela yokuzikhusela ndingenala nexhala loba ndingathini xa ndinokudlwengulwa ngoku ndiyazazi uba ndingathinina ndingayaphi ndifike ndenzeni noba umntu angandivusa ebuthongweni ndingamxelela yonke into endiyaziyo nge Rape okanye ndimcende yaye ndingakwazi ukuma phambi kwabantu ndithfethe ngodlwengulo ndibancende.
Apha ecampini ndifunde ukuba ndingaziphatha kanjani ndinga thini ukuzibonakalisa ebantwini ukuba ndiluncedo kangakanani ebantwini ndifunde ukuba xa ndisenze into ndingencami ndomelele ndibenethemba ndizixeleleukuba ndizophumelela ngamaxesha onke ndifunde indlela yokuphathe omne umntu nendlela yokuthedtdha nkomnye umntu yonke into ibisenziwa indifundise kakhulu ebomini bam ndincedakele kakhulu ebomini bam.
Ndizithembise ngento yonke ndibenethemba ndizihloniphe noba kunzima kangakanani ndomelele ukuze nabanabantu endibancedayo bomelezeke.
Ndizixelele ukuba ndizomnceda omnye umntu ndizazi izinto emandizenze eluntwini ndingazifihli ndenze umahluiko ebantwini ngokubaxhasa.